Jaavii Hernaandeez Baarseloonaa gadilakkisuun isaa mirkanaaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Jaavii Hernaandeez Baarseloonaa gadilakkisuun isaa mirkanaaye
Jaavii hernaandeez woggoota 17f argaa Baarseloonaaf fuula, dirree taphaa irratti ammaoo motora ta’ee tajaajilaa ture
Kan Baarseloonaa beeku hundi Jaaviiyeer ‘Jaavii’ Hernaandeez hinbeeku jechuun nama dhiba. Jaaviin woggoota 17 argaa Baarseloonaaf fuula, dirree taphaa irratti ammaoo motora ta’ee tajaajilaa ture. Egaa tajaajila woggaa dheeraa booda Jaaviin yeroo jalqabaatiif woyaa kilabii biraa uffatee dirree kubbaa miilaa seenuuf deema.
Akka ibsa gama Baarseloonaatii bayetti imalli Jaaviin gara kilabii Kataaritti godhu waan dhumateedha. Kilabiin Jaavii haarofni Al Saaditti jedhama. Dirree seenee Al saadaatiif taphachuu kan isa dhoorgu yeroo qofa. Hanga woqtii taphaa isa itti aanuttii eeguuf dirqma, Jaaviin.
Jaavii Hernaandeez si’a 760 Baarseloonaaf taphate. Yeroo Baarseloonaaf taphataa turetti, Jaaviin, injifannoo gurguddaa kilabichaaf argamsiiseera: geeba La Liigaa 8, Waancaa Nugusichaa 2 fi Shaampiyoonaa Awurooppaa 3.
Jaaviin, ‘Murtee salphaa hinturre. garuu deemuudhaaf yeroon amma,’ jechuun yaada isaa laate. Mataan isaa deemi-deemi jedhus onneen isaa ammas Baarseloonaa jiraachuu isaas hindhoksine, Jaaviin. Ammaaf taphoota woqtii kanaaf hafan 3n irratti kan hirmaatu ta’a.
Previous articleAwol Allo: Washington enables authoritarianism in Ethiopia
Next articleNews24: Ethiopia to be put to the test in general election